आत्महत्या विरुद्धको दिवस आज : यी ५ नेपाली कलाकार जसले आत्महत्या गरे - Kantipath.com
आत्महत्या विरुद्धको दिवस आज : यी ५ नेपाली कलाकार जसले आत्महत्या गरे
काठमाडौं- सेप्टेम्बर १० लाई विश्वभरि आत्महत्या विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाइन्छ। तनाव, मानसिक रोग, डिप्रेसन जस्ता समस्याले विश्वभरि नै बर्सेनि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो छ। विश्वका बर्सेनि ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने अनुमान छ। आत्महत्यालाई कतिले कायरताको संज्ञा दिन्छन् त कतिले हिम्मत। अनेकथरि बहस छन् आत्महत्यालाई लिएर। अधिकांशले भने एकबारको जीवन आत्महत्या गरेर त्यसै अन्त्य गर्न नहुने तर्क गर्छन्।
संसारमा धेरै सेलिब्रेटीले आत्महत्याको बाटो रोजेर आफ्ना प्रशंसकलाई स्तब्ध पारेका छन्। नेपालका केही कलाकारले पनि त्यस्ता कदम उठाएर आफन्त र समर्थकलाई दुःखी बनाएका छन्। आत्महत्याको बाटो रोज्ने ५ नेपाली कलाकारको सूचि यस्तो छ:
युवापुस्तामा ‘र्‍याप ब्याटल’लाई लोकप्रिय बनाउनमा सक्रिय यमबुद्धले गत वर्ष बेलायतमा आत्महत्या गरे। युवापुस्तामाझ लोकप्रिय उनले बेलायतस्थित आफू बस्ने घरको शौचालयमा पासो लगाई आत्महत्या गरेका हुन्। मेरो जुत्तामा, साथी, आउँदैछु म, फुटपाथ मेरो घर, यो प्रसंग, दिदी, अन्त्यको शुरुवात, नाचन, आमा लगायत उनका कयौं गीत हिट छन्।
गायिका योगिता मोक्तानले पनि आफ्ना सारा समस्याको समाधान मृत्युमै देखिन्। उनले प्रेममा धोका पाएपछि सन् २०१३ मा आत्महत्या गरिन्। उनी विशेषगरी तामाङ सेलो गीतका लागि चर्चित थिइन्।
म्युजिक भिडियोमा अभियन गर्ने जेशिका खड्काको एकाएक गायक प्रकाश ओझासँगको नग्न भिडियो सार्वजनिक भयो। त्यो घटनाले उनी निकै विक्षिप्त बनिन्। त्यो घटनापछि पनि उनी अभिनय क्षेत्रमा फर्किएकी थिइन्। केही समय विदेश बसेकी जेशिकाले केही चलचित्रमा अभिनय समेत गरिन्। अन्ततः सन् २०१२ मा उनले पनि आत्महत्या गरेर आफ्नो जीवन अन्त्य गरिन्।
प्रतिभावान गायक कुल पोखरेल पनि असमयमै गए। २३ वर्षको उमेरमा सन् २००३ मा संसार छाडेका कुलका ‘आमा’, ‘हुन्न र’, ‘यो इ यो यो’, ‘यसपाली दशैंमा’ लगायतका गीत चर्चित छन्। ड्रग्सको कुलतमा फँसेका कुलको आत्महत्याको कारण ड्रग्स नै मानिएको थियो।
श्रीषाको घरमा एक सैनिक मेजरसँग विवाहको कुरा चल्दै थियो। सोही बखत एक साप्ताहिक पत्रिकाले उनको नाङ्गो तस्विर छाप्यो। त्यो घटनाले मानसिक रूपमा हतोत्साही बनेकी श्रीषाले सन् २००२ मा पासो लगाएर आत्महत्या गरिन्। उनले ‘घाँम छायाँ’ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी थिइन्।
Previous Previous post: कसले जित्ला ‘आई लभ यु २’ को १ लाख ?
Next Next post: NRN कोरियाको अध्यक्षमा लक्ष्मी गुरुङ
एक अर्ब ४० करोड बराबरको सिमेन्ट बिक्री
बेचिन लैजाँदै गरेका बालिकालाई धम्की दिएर बयान फेर्न लगाएको आरोप
पहिरोले थुनिएको गुर्जाखोला तलाउ भरिएर बग्न थाल्यो
इलाममा जङ्गली च्याउ खाँदा बाबु छोराको मृत्यु
पाँच महिने बालिकाको हत्या
गृह मन्त्रालयको प्रवक्तामा सह–सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल
मन्दिरको सुन चोर्ने एमाले नेता कार्की सहित ५ जना पक्राउ
तमानले बनायो आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम
कागेश्वरी मनोहरामा बस्तीको बीचमा प्लास्टिक उद्योग : बन्द गर्न टोल समितिको पत्र !
विद्यालय उमेरमै विवाह !
नदीमा बगेर दुई बालिका बेपत्ता
ठेक्का लिएर सडक अलपत्र पार्ने कांग्रेस सांसद जिपछिरिङको पोल-पोलमा फोटो !
‘गरीबलाई प्रकृति पनि निष्ठुरी हुने रहेछ’
पार्टी र संसदबाट निष्काशित प्रभु साह आइटी आर्मी बनाउदै
ओलीको २४ घण्टे स्पष्टिकरणको समय सकियो : अझै पुगेन पत्र !
हेलम्बुका बाढी प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण शुरु
बन्धकी खेतमा सामूहिक खेती गर्दै विपन्न